Mambo oparidza shoko reCovid-19 | Kwayedza
Mambo oparidza shoko reCovid-19
18 Nov, 2020 - 09:11	 2020-11-18T09:54:10+00:00 2020-11-18T09:54:10+00:00 0 Views
MAMBO Chikwaka vekuGoromonzi, VaWitness Murambiwa Bungu – avo vanova zvakare mukuru wemadzishe kudunhu reMashonaland East – vanoti zvakakosha kuti vatungamiriri vave pamberi panyaya yekurwisa chirwere cheCovid-19.
Muhurukuro neKwayedza, Mambo Chikwaka vanoti vakatora danho guru rekupa mabhasikoro kumasabhuku avo ose anokwana 472 kuti vakwanise kushanyira nharaunda vachipa veruzhinji chenjedzo pamusoro pedenda iri.
“Ini samambo ndakatanga kuita zvirongwa zvechenjedzo pamusoro pechirwere ichi nehutungamiri hwose hwemudunhu mangu hunosanganisira mudzviti, vakuru vekanzuru, makanzura nemasabhuku. Ndakapa masabhuku angu ose mabhasikoro ayo vanofamba vachiparidza kuipa kwechirwere ichi,” vanodaro Mambo Chikwaka.
Vanotenda mumiririri weGoromonzi North mudare reNational Assembly, Cde Ozias Bvute, avo vari kubatsira zvakanyanya muchirongwa chekurwisa Covid-19 mudunhu ravo.
“MP wedu VaBvute takabatana navo vakatenga michina yekusonesa iyo vakaisa kumaward edu ari mapfumbamwe, vakapa michina mitanhatu paward kureva kuti mumawards ose yakaita michina 54 iyo iri kushandiswa kusona mamasiki ari kupihwa kuvanhu.”
Mambo Chikwaka vanoti michina iyi iri kushandiswa zvakare kusona midziyo inosevenzeswa nevanhukadzi panguva dzavo dzekutevera.
“Mukati memadzimai ari kusona aya tine vana vechikoro vari kusonawo mamasiki nemapads vanosanganisira vechikoro cheChinyika Secondary, Dzvete nezvimwe. Pose pari kufamba hutungamiri hwekuno, shoko ndiro ndiro rekuparidza zvekurwisa Covid-19,” vanodaro Mambo Chikwaka.
Vanoti zvakakosha kuti veruzhinji varambe vachitevedzera matanho ose akatarwa ekurwisa chirwere ichi.
“Tiri kupa yambiro pamusoro pechirwere ichi. Dunhu redu riri padyo neguta reHarare saka tinofanirwa kugara takangwarira nekushanyirwa kwedu nevanhu vakawanda,” vanodaro mambo ava.